Nasitrika ao an-kibon'ilay ankizivavy 14 taona ny ampahan'ny karandohany • L'Express de Madagascar
Nasitrika ao an-kibon’ilay ankizivavy 14 taona ny ampahan’ny karandohany
MIPETRAKA AO AMIN’NY KIBON’ITY ANKIZIVAVY 14 TAONA NY AMPAHAN’NY KARANDOHANY. TAORIAN’NY FANDIDIANA NY LOHANY, NOHO NY FISIANA VAINGAN-DRA TAO AMIN’NY ATIDOHANY, NO NAMINDRANA IZANY. MITANTARA NY FAHASAROTAN’NY FITSABOANA NY FIANAKAVIANA, IZAY EFA LANY VOLA TANTERAKA. MBOLA VIDIAN-DAFO TOKOA MANTSY NY FITSABOANA ETO MADAGASIKARA.
Sahiran-tsaina ny renin’i Finaritra amin’ny fitsaboana azy.
Efa mandroso sy lasa lavitra ny fitsaboana, na dia eto Madagasikara aza, firenena voasokajy ho isan’ireo dimy mahantra indrindra maneran-tany. Vidian-dafo anefa ny fitsaboana eto amintsika. Ankizivavy iray no miaina an’ireo tranga roa ireo, amin’izao fotoana izao: fahagagan’ny fitsaboana sy ny halafony. Itsirian’ny fanantenana aloha, na izany aza, ny fianakavian’io zazavavy io.
Nafindran’ny mpitsabo ao amin’ny kibony ny karandohan’i Finaritra Nasoloniaina, ankizivavy 14 taona, taorian’ny fandidiana ny lohany, noho ny fisian’ny vaingan-dra tao amin’ny atidohany, no namindrana izany. “Tsy afaka haverina ilay karandoha, raha tsy miala ny mikraoba ao amin’ny atidohany, ka izay no tsy namerenan’ny mpitsabo azy sy nametrahany izany ao amin’ny ilan-kibony havanana, aloha”, hoy i Fara Raharinina, renin’i Finaritra.
Lazoin’ny aretina maro i Finaritra. “Raha ny fanazavana azonay, dia misy mikraoba any amin’ny fony. Efa miakatra any amin’ny atidohany io mikraoba io, amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy mbola hotsaboina avokoa izany, ka izay no antony tsy namerenana ilay karandoha aloha”, hoy ny reniny. Ny 10 novambra lasa teo no natao ny fandidiana an’i Finaritra. “Ankoatra ny fandidiana ny faritry ny lohany, dia nisy ihany koa ny fandidiana ny kibony, nahafahana nampirina ilay karandoha”, hoy hatrany ilay renim-pianakaviana.
Efa manomboka misy fihatsarany kely i Finaritra, iray volana latsaka kely taorian’ny fandidiana. “Efa manomboka mihiratra ny masony. Efa fantany avokoa izay tenenina aminy”, hoy i Sitraka Harison, zanaky ny mpiray tampo amin-dreniny. Ato ho ato no hamerenana amin’ny laoniny ny karandohany, raha ny voalazan’ny fianakaviana.
Mamangy matetika an’i Finaritra i Sitraka sady manampy ny fianakaviana amin’ny fitadiavana fanampiana hitsaboana.
Fidoboky ny fo haingana
Hiditra hianatra amin’ny Taona fahavalo (classe de 4ème) i Finaritra no voatery niato tamin’ ny fianarany, noho ny tsy fahasalamana iainany ankehitriny. “Taorian’ny nandehanany “voyage d’études” tamin’ny avrily 2016, no nanomboka narary izy. Toy ny voan’ny tazo no fisehon’ny aretina tamin’ny voalohany. Niakatra foana ny hafanany ary niafara tamin’ny fidobodoboky ny fo haingana loatra (palpitation), nahatratra hatramin’ny 165 isa-minitra. Notsaboina tamin’ny mpitsabo tsy miankina, kanefa tsy nisy fiovana mihitsy. Rehefa notarafina vao hita hoe misy mikraoba ao amin’ny fony”, hoy ny reniny.
Nasain’ny dokotera nitsabo azy nampidirina hôpitaly haingana i Finaritra tamin’io fotoana nahitana ny aretiny io saingy tsy teo no ho eo dia nandeha ny fianakaviana. “Tsy nisy ny vola teo an-tanana, ka tsy afaka ny nitondra azy niditra hôpitaly izahay”, hoy hatrany ny reniny.
Nihareraka i Finaritra ary nisy fotoana niakatra be tampoka ny hafanany. Teo vao tapa-kevitra ny fianakaviana nitondra azy niditra hôpitaly lehibe iray teto Antananarivo.
Ra miangona amin’ny atidoha
Niakatra ny tosi-dran’ilay zaza, rehefa natao ny fizahana azy nony tonga teny amin’ilay hôpitaly. Mbola nahavita nitaraina hoe “marary”, sy nanao ny zavatra nasaina nataony, toy ny manangana ny tanany izy tamin’ny vao tonga. Nopetahin’ny mpitsabo fampatoriana anefa, mba tsy hitaran’ny aretina. “Nakipiny ny masony, dia tao izy”, hoy ireo havany nanatri-maso.
Andro vitsivitsy taorian’izay, niverina nihiratra indray izy, tsy naharitra ela anefa izany. “Nisy fotoana nanalana rano tao amin’ny lamosiny, taorian’izay dia tsy niteny intsony izy sady tsy nahay nandeha”, hoy ireo havany.
Tsy nisy fivoarany firy mihitsy ny fahasalamany, taorian’io fidirany hôpitaly io ary voatery nafindra hôpitaly izy. “Na ny dokotera aza sahirana. Misy fotoana mihenjana ny hozany, mihinjitra ny ilany ambony havanana”, hoy indray i Fara Raharinirina. “Betsaka ny fizahana natao, fa tsy nahitana na inona na inona. Fitiliana tany amin’ny atidohany vao hita fa misy ra miangona ao amin’ny lohany”, hoy ny tohin’ny resany. Io valin’ny fitiliana io no namindrana azy haingana teny amin’ny Hjra sy nanaovana ny fandidiana azy, ny 10 novambra.
Finaritra eo am-pitsaboana.
Mipetraka ao anaty tranolay
Lasa niorim-ponenana etsy amin’ ny Hjra ny fianakavian’i Finaritra. Nametraka lay eo amin’ny tokontanin’ny hôpitaly izy ireo.
“Nangataka tamin’ny tompon’ andraikitry ny hôpitaly mihitsy izahay ny hahafahanay mametraka ity lay ity eto. Lavitra mantsy no misy anay, ka manahirana ny fivezivezena”, hoy ny fitantaran’ny fianakaviana. Ahitana vilany, fatana, vilia, sotro sy ireo kojakoka hafa ilaina ao an-dakozia ao amin’ity tranolay kely ity. Ankoatra ny maha toerana fandrahoana sakafo azy dia hatorian’ireo mpanaraka ny marary ihany koa. “Olona dimy na enina eo ho eo izahay no mijanona aty. Misy fotoana mantsy mila ra tampoka, na misy fanafody tampoka vidiana amin’ny alina, dia tsy maintsy mitady toeram-pivarotam-panafody mpiandry raharaha. Tsy ho vitan’ny olona iray na roa izany, ka mifanohana eto izahay”, hoy ny renin’ny marary.
Nanao fety tany amin’ ny hôpitaly
Ny 28 oktobra ny tsingerin-taona nahaterahan’i Finaritra. Tany amin’ny hôpitaly izy tamin’io fotoana io. Finday, no fanomezana azony, tamin’izany. “Nanontany azy ny mpiray tampo amiko, hoe, inona ny fanomezana tian’ i Finaritra. Namaly izy hoe “lafo be”. Niteny taminy ireo mpiray tampo amiko hoe tsy maninona na lafo aza. Izay izy vao niteny hoe “téléphone android”. Nanao tsipaipaika izy ireo, ka nividy ilay nofinofin’ny tovovavy. Faly aok’izany izy hoe manana finday”, hoy indray i Fara Raharinirina. Nampihainoana azy hira io finday io, taorian’ny fandidiana azy. “Natoron’ny mpitsabo izahay hoe mila mihaino hira izy”, hoy ny renin’i Finaritra.
Tena finaritra toy ny anarany mihitsy izy raha ny fitantaran’ireo olona akaiky azy. “Olona sariaka, miresaka amin’ny olon-drehetra. Tia misangy ary tsy mba miady aman’olona izany”, hoy i Sitraka Harison, zanak’olona mpiray tampo aminy. Niteraka toetra hafa ho azy kosa ny aretiny. “Lasa mihanta be izy. Tsy mba mparary mantsy io zanako io, fa vao voa tonga dia reraka”, hoy ny reniny.
Manan-talenta ihany koa izy. “Tia mihira sady mahay mihira i Finaritra. Mpikambana amin’ny antoko mpihira mihitsy izy. I Melky ny mpanakanto tena tiany. “Mimôza”, hiran’i Dama sy Bodo, kosa ny hira tena fihirany matetika”, hoy ny reniny. “Hôtesse de l’air” kosa ny asa iriany hatao rehefa lehibe ary ny taranja anglisy no taranja tena voafehiny any an-tsekoly.
An-tapitrisany maro ny vola efa lanin’ity fianakaviana kely ity, izay tsy manana foto-pivelomana ankoatra ny fivarotana enta-madinika, nandritra izao fitsaboana an’i Finaritra izao. “Ny vidim-panafody sy ny fitaovana lany tamin’ny fandidiana fotsiny no efa 2 tapitrisa ariary”, hoy ny reniny. Ny fianakaviana no tena manampy azy ireo ary efa miparitaka any amin’ny tambajotran-tserasera any ihany koa ny fangatahana fanampiana, ka izay no mbola hahafahan’ izy ireo mitsabo, amin’izao fotoana izao.
Mbola vao dingana iray fotsiny amin’ny fahasitranana tanteraka anefa io fandidiana ny lohany io. “Mbola mila haverina tarafina any amin’ny loha izy, ahitana hoe efa afaka haverina ve ny karandoha sa tsia. Ny fony ihany koa mbola hotsaboina”, hoy ny reniny, nisento.
Miantso vonjy amin’ireo malala-tanana i Fara Raharinirina, mba hanampy azy ireo amin’ny fitsaboana ny zanany. “Tantaraina mora foana, fa rehefa tena iainana mahalasa adala. Ny tena mahakivy ahy dia zaza tsy mba marary izy, kanefa izao tena voa mafy izao”, hoy hatrany ity renim-pianakaviana.
Afaka antsoina amin’ny laharana 033 01 348 92 i Fara Raharinirina, renin’i Finaritra, ho an’ireo te hanampy azy. Azo atao ihany koa ny mandefa ny fanampiana amin’ny finday, amin’ny laharana 034 74 344 74 na ny 032 81 512 82 na ny 033 20 444 43.
“Na 2 000 ariary aza dia manampy be. Ireny no mitambatambatra dia mahavita zavatra”, hoy ny renin’i Finaritra, izay misaotra sahady ireo olona efa nanolo-tanana azy ireo, sy mbola vonona ny hanampy azy.
Tan-tsoroka – Mpirotsaka an-tsitrapo enina hetsy nanome ra maimaim-poana
Hafindra eny Soavimasoandro ireo olona horavana trano eny By Pass